ရိုဇဟ် နှင့်ပတ်သက် ပြီး သိထားရမည့် အကြောင်းအရာ များ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ရိုဇဟ် နှင့်ပတ်သက် ပြီး သိထားရမည့် အကြောင်းအရာ များ
ဒီဇငျဘာ ၂, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၄ ညနေ
News Code : 795641
ရိုဇဟ် နှင့်ပတ်သက် ပြီး သိထားရမည့် အကြောင်းအရာ များ ကို လေးစားရသည့် အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်လေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အမေး (၄) : ကိုရ်ဘသန်အေလ္လာဟ်( قربةًاِلی الله)ဆိုတာ ?
အဇါန် မတိုင်ခင် အလျင်
ü = နီယသ်လုပ်နိုင်သည်။ရိုဇဟ်ပိုင်၏။ û နီယသ်မလုပ်နိုင်ချေ။
• အကယ်၍ လ၊မမြင်မည်ဆိုလျှင် မနက်ဖန် ရှအ်ဗာန်လ ၏ ၃၀ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
• အကယ်၍ လ၊မြင် ၊မမြင်သံသယ ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေ တွင်လည်း ရိုဇာထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
သွားကြားညှပ်နေသည့် အချို့ အရာ များကို တမင်တကာ စားမည်ဆိုလျှင်
မေ့ပြီး တစ်ခုခု စားမိမည်၊ သောက်မိ မည်ဆို လျှင်
အရသာရှိသည့် စားဖွယ် သောက်ဖွယ် များကို မြင်ပြီး သွားရည်ကြ မည်၊ ပြီး နောက် သွားရည်များကိုတမင်တကာ မျိုချ လိုက်မည်ဆိုလျှင်
ချွဲသလိပ် ပါးစပ် တွင် မရောက်မီ မျိုချ မိလျှင်
• အဲဟ်သေယာသ်ဝါဂျစ်ဗ် အရ ရိုဇဟ် ပျက် ပါသည်။
၁- ဖျားနေချိန် ဆေးအဖြင့် ထိုးရန်
၂- ကိုယ်ခန္ဓာအချို့နေရာကို ထုံဆေး ထိုးဖို့ အတွက်
၃-အားပြတ်နေ၍ (သို့) ငတ်မွတ်မှုကို ဖြေ သိမ့်ရန် ဆေးထိုးမည် (အားဆေး သွင်း မည်)
• ရိုဇဟ် ရှိသည်ဆိုတာ မေ့သွားချိန်
• ဝါဂျစ်ဗ်နမာဇ်အတွက် အာလုပ်ကျင်းချိန်
• ဖုန်မှုန့် ထူထူ လည်ချောင်း အထိ ရာက်သွားမည်ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်ပါ သည်။
• မည်သည့်အရာ ဝတ္ထု၏ အမှုန့် ဖြစ်နေပါစေ ။
⌠ ဥပမာ စားလို့ပိုင်သည့် အမှုန့် မျိုး ၊သာဓက အားဖြင့် ဂျုံမှုန့် ဖြစ်ပါ သည်။
⌠ သို့မဟုတ် စားလို့မပိုင်သည့် အမှုန့်မျိုး ၊သာဓက အားဖြင့် မြေမှုန့် ဖြစ်ပါ သည်။
• အကယ်၍ ရှူဆေးဘူး (သို့မဟုတ်) spray မသုံးပဲ ရမ်တွာန်လမြတ် ပြီးနောက် ရိုဇာ ထားနိုင်လျှင် အဲဟ်သေယာသ်ဝါဂျစ်ဗ် အရ ရိုဇဟ် ကဇွာ ထားရပါမည်။ (အာယာသွလ္လာဟ် ခါ မေနာအီ)
• အကယ်၍ ဤအငွေ့ ပါးစပ် အတွင်း စုပြီး ရေအသွင် ဆောင်သွားလျှင် မျိုချခွင့် မရှိပါ။
• တမင်တကာ မပြောသည်ကို ပြောသည်ဟု ဆိုလျှင် ရိုဇဟ် ပျက်ပါသည်။
• အမှန်ထင်ပြီး ဆင့်ပြန်လေ၏။ပြီးမှာ မုသားဖြစ်ကြောင်း သိလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
• မှန်လား၊မုသားလား မသိသည့် အရာ ကိုတင်ပြလျှင် အကိုး၊အကားနှင့် တစ်ကွ တင်ပြရပါမည်။
ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ခေါင်းကို ဖုံးထားမည်
• တမင်တကာ အန်ခြင်းဖြင့် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါသည်။ ယုတ်စွ ဖျားနာခြင်း ကြောင့် မတတ်နိုင်သည့် အဆုံးအန်ရသည်ပင် ဖြစ်ပါစေ။အလိုလို အမှတ် တမဲ့ အန်မိလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
• အကယ်၍ ရိုဇဟ်ထား တာ မေ့ပြီး အန်မိလျှင် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
• ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် ဂိုစ်လ်လေ ဂျနာဗသ် ပါ ပြုရပါမည်။
• ရိုဇဟ် ရှိနေစဉ် ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် ရိုဇဟ် ပျက်သွားပါသည်။ ယုတ်စွ ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီး အချင်းချင်း မေတ္တာမျှကြရင်း၏ ရလာဒ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ။
• နမာဇ် ဝတ်ပြုဖို့ ဂိုစ်လ် လုပ်ရပါမည်
• သို့သော် အမြန် ဂိုစ်လ် လုပ်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
• ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် လည်း ရိုဇဟ် ပျက်ပါတယ်။သုတ်ရည်ထွက် သည် ဖြစ်စေ ၊မထွက်သည်ဖြစ်စေ ။
• ကာမစပ်ယှက်ခြင်းမှ အပဇနှီးမောင်နှံ တစ်ဦးနှင့်၊တစ်ဦး အခြား အရသာ များကို ခံစားရာတွင် ပြဿနာ မရှိပါ။
• သုတ်ရည်မှအပ အခြားအရည်များ ထွက်ပါသည်။ထိုအရည်များ ကြောင့် ရိုဇဟ် မပျက်ပါ။
• အကယ်၍ ခရီးစဉ် ၁၀ ရက် (သို့) ၎င်းထက်ပိုများ မည်ဆိုလျှင်
• အကယ်၍ တမင်တကာ ဂိုစ်လ် / သယမွန်မ် မပြုသည်ဆိုလျှင် အကယ်၍
⌠ ရမ်တွာန်လမြတ် ၏ရိုဇဟ် ဆိုလျှင်
⌠ ရမ်တွန်လမြတ်၏ ကဇွာရိုဇဟ် ဆိုလျှင်
⌠ မွတ်စ်သဟဗ် ရိုဇဟ်ဆို လျှင် : ရိုဇဟ် ပိုင်ပါသည်။
• အကယ်၍ ဂိုစ်လ်လေ ဂျနာဗသ် မပြုဘဲ အိပ်ပျော်သွားမည်။ ဖဂျရ်
• ဂိုစ်လ်လေမတ်စ်စေမယသ် ဆိုသည်မှာ မယသ် ကို ထိမိ သည့် အတွက် ကြောင့် ပြုရမည့် ဝါဂျစ်ဗ် ဂိုစ်လ် ကိုခေါ်ပါသည်။
• တစ်ဦးတစ်ယောက် အပေါ် ဂိုစ်လ်လေမတ်စ်စေမယသ် ပြုရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ် နေချိန်တွင် လည်း ရိုဇဟ်ထားနိုင်ပါသည်။
• နမာဇ်အတွက်တော့ ဂိုစ်လ်လေမတ်စ်စေမယသ် ပြုရန် အရေး ကြီးပါသည်။
• ဝမ်းချူခြင်း - ဆိုလိုသည်မှာ ဝမ်းချုပ်မှုကို ဖြေရှင်းရန် စအိုပေါက် နေရာ တွင် ဆေးဝါး ထည့်ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ဤဆေးဝါးသည် အခဲလည်း ရှိ သလို အရည် လည်း ရှိပါသည်။
• ဖျားနေသည့်အတွက်ကြောင့် မလွဲမရှောင် သုံးရသည် အခြေအနေ တွင် လည်း အရည်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဝမ်းချူ ခြင်းသည် ရိုဇဟ်ကို ပျက်စေ ပါသည်။
• တမင်တကာ လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ရိုဇဟ် မထားမည် (သို့) ဖျက် လိုက်မည်ဆိုလျှင် ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဒဏ်ကြေး ကို ကဖ်္ဖရဟ် ဟုခေါ် ပါသည်။
• အကယ်၍ ငွေ ပေးမည်ဆိုလျှင်လည်း ၎င်းတို့ကို ဂျုံမှုန်
• ၎င်းပြောသည့် အတိုင်း လုပ်မည်ဆိုတာကိုလည်း စိတ်ချ ဖို့
⌠ တမင်တကာ လုပ်လျှင် ကဇွာလည်း ပြုရမည်။
⌠ မိမိသဘောအရ မိမိ ပြုလုပ်လျှင် ၊
⌠ မည်သည့် ခိုင်လုံသည့် ရှရီအီအကြောင်း
⌠ မဇ်အလေကို နားလည်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ပါ။ ရိုဇဟ်ကိုပျက်စေတဲ့ အလုပ် တွေကို လုပ်သည့်အချိန် ဤအရာတွေလုပ်ရင် ရိုဇဟ် ပျက်ကြောင်းအ နည်း ငယ်ဖြစ်ဖြစ် သိနေ၏။
⌠ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်နှင့် ၊ မအ်စူမီးန် () မပြောသည့် စကားတစ် ခုခုကို ပြောသည်ဟု လိမ်ပြောခြင်း ၊ ဤကဲ့သို့လုပ်လျှင် ရိုဇဟ်ပျက် ကြောင်း အသိမရှိချေ။
အစ်သဂ်ဖေရွလ်လ္လာဟ် اَسْتَغْفِرُاللهَ )(ဖတ်ပြီးဝန်ချတောင်းပန်ပါ။
• အကယ်၍ ဆင်းရဲသား တစ်ယောက်တည်းကိုလည်း မကျွေး နိုင်
လျှင်အစ်သဂ်ဖေရွလ်လ္လာဟ် اَسْتَغْفِرُاللهَ )(သာ ဖတ်ပြီးဝန်ချ တောင်း
• တတ်နိုင်သည့်အခါမှ ကဖ်္ဖရဟ် ကို အပြည့်အဝ ပြန်ပေးပါ။
•ဇဟိုရ် အချိန်မရောက်မီအလျှင် ရိုဇဟ် ကိုဖျက်လိုလျှင် ဖျက်ခွင့်ရှိပါသည်။
•ဖျက်ခဲ့လျှင် ကဖ်္ဖရဟ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
• ဆင်းရဲသားမိုအ်မင်၁၀ ဦးကို ဗိုက်အဝ ကျွေးရမည်။
• ၎င်းတို့အား ၇၅၀ ဂရမ် တစ်နည်းအား ဖြင့် ၃ပေါင် ရှိ သည့်
• အကယ်၍ ငွေပေးမည်ဆိုလျှင်လည်း ၎င်းအား ဂျုံမှုန့်စသည်ဖြင့်
• ငွေကိုပြောသည့်အတိုင်းလုပ်မည်ဆိုသည့် စိတ်ချရမှုလည်းရှိရန်
• ဆင်းရဲသား ၁၀ ဦးကို ပြည့်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ ဆင်းရဲသား
⌠ ဇိုက်နေပြန်ကောင်းသွားသည်။သို့သော် နောက်နှစ် ရမ်တွာန် လ မြတ် ရောက်လာ သည် အထိ ရိုဇဟ် ကဇွာ မထားရသေးပေ။
• အကယ်၍ ငွေပေးမည်ဆိုလျှင်လည်း ၎င်းးအား ဂျုံမှုန်စသည်ဖြင့်
• အချိန်ဆွဲ မှုအတွက် ကဖ်္ဖရဟ်တစ်ကြိမ် တစ်ခါသာ ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း(၁):ဘယ်အတွက် ဗဒဲလ် (بدل)ဖြစ်ပြီး ?
ဖြေ: ရိုဇဟ်မထားသည့် အတွက် ဗဒဲလ် (بدل)(သို့) အေဝဇ်(عوض)လုပ်ရ ပါ သည်။ ဤအတွက် တစ်ချို့ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ ရှိပါတယ်။
ဖေဒ်ယဟ်(فدیه)ကို မည်သူပေးဆောင်ရပါသနည်း ?
၎င်းအပေါ်ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။၎င်းအနေဖြင့် ရိုဇဟ်တိုင်းအစားဖေဒ်ယဟ် ပေး ဆောင်ရပါမည်။
၎င်းအပေါ်ရိုဇဟ်ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။၎င်းအနေဖြင့် ရိုဇဟ်တိုင်းအစားဖေဒ်ယဟ် ပေးဆောင် ရပါမည်။
ရင်သွေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ် ရှိလျှင်
ရောဂါကြောင့် ရိုဇဟ် မထားမည်
၎င်းအတွက်ရိုဇဟ်ကဇွာ ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။ နေ့တိုင်း အတွက် ဖေဒ်ယဟ် ပေးရမည်
• တစ်ယောက်တည်း ကို တစ်ရက်ထက်မက ဖေဒ်ယဟ် ပေးနိုင်ပါ
• မရှိဆင်းရဲသား မိုအ်မင်အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါ
• မိခင်၊ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီး နောက် အသက်ရှင်လျက်ကျန်နေသည့်သားများ အတွင်း မှ အကြီးဆုံး သားကို ဆိုလိုပါသည်။
• အကြီးဆုံးသား ဟာ မိခင်၊ဖခင် အသက်ရှင်နေစဉ် ကွယ်လွန်သွား တာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
• သမီးများ အတွက် မည်သည့် တာဝန် မျှ မရှိပါ။
• သံသယ ရှိသည့် ကဇွာရိုဇဟ်များကို ထားရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
⌠ဤ အခြေအနေတွင်လည်း ဟဒ်ဒေသရာခွစ် (ترخصحد)အထိမရောက် မခြင်း စားခြင်း သောက်ခြင်း စသည်တို့ကို မပြုနိုင်ချေ။
မေးခွန်း(၁) : ဟဒ်ဒေသရာခွစ် (ترخصحد) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?